रविलाइ अमेरिकाको चील हो भन्दै मुकुन्द घिमिरे - info4nepal
रविलाइ अमेरिकाको चील हो भन्दै मुकुन्द घिमिरे
बहुचर्चित मुकुन्द घिमिरेले रवि लामिछानेको बारेमा आफ्नो फेसबुकमार्फत येसो भनेका छन :
“आफैंले थुकेको थूक आफैं चाट्न खोज्नेहरु देखिए, देश विदेशका नागरिकताहरु साट्न खोज्नेहरु देखिए, उता संकट परेपछि अमेरिकी चील यता आउने भयो, नेपाली शान्तिका परेवाहरुलाई हच्काउने भयो, भूतसँग सीधा कुराहरु दोहोरिन सक्छन्, भविष्यका लागिको मेरो मुकुन्दल्याण्डका सुन्दर योजनाहरु चोरिन सक्छन्।”
“अब नेपाली भैसकेपछि चैं जुत्ता पालिस गर्न पनि पाउँछन्, सरेन्डर गर्नलाई दिनभरि दूतावास अनि अध्यागमन पनि धाउँछन्, जनतासँग सीधा कुरा राजनीतिक पदावली घाँडो नहोस्, पैसा उठाएर समाजसेवा ठगी खाने भाँडो नहोस्, ३ करोड जनताको भन्नेहरु वडाध्यक्ष भएर देखाऊ, आफ्नो औकात बुझेर क ख सिक्न नाम लेखाऊ!”
काम नपाउने बिदेशिने नेपालिलाइ पनि मुकुन्दले काम दिने:
काठमाडौं । ‘पहाडमा रेलैरेल । मधेसमा खेतैखेत । ट्याक्टरले खेत जोत्ने । हेलिकप्टरले बीउ छर्ने । १० करोडसम्म जनतालाई सुखले पाल्ने । र, ३६५ दिन नै दसैं घोषणा गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम छ ।’ यो कुनै ठूलो राजनेताको भाषण होइन ।
केही वर्षअघिसम्म रत्नपार्कका रुखमाथि चढेर भाषण गरी चर्चामा कमाएका मुकुन्दे अर्थात् मुकुन्द घिमिरेले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमार्फत अघि सारेको राष्ट्र निर्माणको योजना हो ।
०५८ देखि ०७० सालसम्म रत्नपार्कमा भाषण गर्दै हिँड्ने मुकुन्दे त्यसयता भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले अाफूलार्इ भविष्यको कार्यकारी राष्ट्रपति दाबी गर्छन् । र, मुकुन्दल्याण्डका जनतालार्इ सुख र शान्तिले बस्न पाउने व्यवस्था अाफूले मिलाउने बताउँछन् ।
दुई वर्षदेखि फेसबुक चलाए पनि मुकुन्देले सक्रियरुपमा ट्वीटर चलाउन थालेको ६ महिना पनि भएको छैन । तर, यति छोटो अवधिमै सेलिब्रेटि बनेका छन । ट्वीटरमा उनलाई दैनिक ३/४ सयले फलो गर्छन्, जुन चर्चित कलाकार वा राजनीतिज्ञको सरह हो ।
‘४/५ महिना मै २८ हजारले फलो गरेका छन् । यो मैले कमाएको सम्पत्ति हो’ मुकुन्दे भन्छन् । भतिजले दुबईबाट आउँदा गिफ्टस्वरुप ल्याइदिएको प्रेष्टिज मोबाइलबाट फेसबूक र ट्वीटर चलाउँछन् उनी ।
‘रत्नपार्कमा असुरक्षा थियो, सामाजिक सञ्जाल निकै सुरक्षित रहेछ ।’ भन्छन् ।
‘उत्कृष्ट श्रेणीका विद्यार्थी प्राविधिक डक्टर इन्जिनियर जाने । बल्लतल्ल पास हुनेहरु कर्मचारीतन्त्रमा हालिमुहाली गर्ने । र, फेल हुनेहरु राजनीतिमा लागेकाले देश बिग्रिएको हो । देश बनाउन मास्टर माइन्डहरु राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर नै म राजनीतिमा लागेको हुँ ।’ ०५५ सालमा ६९ प्रतिशत ल्याएर पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानबाट ओभरसियर पास गरेका मुकुन्दे भन्छन्।
हिन्दू धर्मका पक्षमा खुलेर बोल्नछन । तर, हिन्दूहरुको महान चाड नमनाएको आठ वर्ष भयो उनले । ‘पूर्वको कर्णाली हो, भोजपुर । घर जाउँ भने पैसा छैन । बाटो खर्चका लागि प्यारा बुबा-आमा र भाइसँग बाझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ दसैं नमनाउनुको कारण सुनाए- काठमाडौंमा आफूले मान्नुपर्ने कोही मान्छे छैन । अनि कोसँग टिका लगाएर दसैं मनाउँ ?’
परिभाषित आम्दानी केही पनि नभएकाले प्राय आफू बेखर्ची हुने गरेको मुकुन्देको दुखेसो छ । ‘कहिले परिवारले त कहिले समाजले सहयोग गरेर साउँको साउँ जिउ चैँ अहिलेसम्म जोगाएकै छु ।’ उनी भन्छन् ।
तर, दसैं र हिन्दूधर्मलाई अत्यन्तै सम्मान र विश्वास गर्छन, उनी । ‘यदि दसैं थिएन भने हाम्रो देश र समाज गरिब दलितबस्ती जस्तै सँधै दुखी हुन्थ्यो । र, हिन्दुत्व हुँदैन थियो भने आइएसआइ जस्ता अतिवादी मुस्लिम संकटहरुले विश्व गाँजिन्थ्यो । देश राजा र श्रीपेच बनाएको नभई, धर्म र मन्दिरले बनाएको उनको ठहर छ ।
०५८/०५९ सालतिर रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा पोते लगाएर बस्थे उनी । ‘नेताहरु सबै नपुंसकजस्तै भएकाले देशमा १५ हजार मान्छे मरेकाले १५ हजार दाना भएको पोते लगाएको हुँ ।’ भन्छन्- ‘म शान्तिबादी हुँ । हिंसा केही मथ्थर भएदेखि पोते फुकालेर राखेको छु ।’
नेताहरुले आमसञ्चार माध्यम र दलका कार्यक्रममा आफ्ना कुरान जनतालाई सुनाउने गरेको तर आफ्ना कुरा सुनाउने फोरम नभएकाले रत्नपार्कमा भाषण सुरु गर्नु परेको उनले सुनाए ।
‘मेरा कुरा जनतालाई सुनाउने अन्य कुनै फोरम थिएन, त्यसैले मैले रत्नपार्कलाई फोरम बनाएको हुँ ।’ भन्छन्- ‘रत्नपार्कले मलाई समाजमा स्थापित गराएको छ ।’
जनयुद्धका बेला माओवादीप्रति निकै आशाबादी थिए, मुकुन्दे । पढाई सकेर क्रान्तिमै होमिने सोच पनि थियो । तर, तीनै माओवादीका कार्यकर्ताबाट मरणाशन्न हुनेगरी कुटाई खानुपर्‍यो । बैदेशिक रोजगारमा गएका पिडीतलाई उद्धार गर्ने उद्देश्यले बैदेशिक रोजगार अध्ययन केन्द्र भन्ने संस्था चलाउँथे उनी ।
‘बैदेशिक रोजगार पीडितको उद्धार भयो भने अधिकांस युवा विदेशिन्छन् र हाम्रो आन्दोलनमा मान्छे लाग्दैनन् भन्ने तार्किन निहुँ पारेर घर गएको बेला (०५९) सालमा माओवादीले मरणाशन्न हुनेगरी पिटे ।’ स्मरण गर्दै मुकुन्दे भन्छन् ।
माओवादीले कुटे पनि उनीहरुको तर्क ठीकै लागेकाले संस्था छोडेर शान्तिका लागि प्रचण्डलाई राष्ट्रिय विभूतिकै सम्मान दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालमा ज्ञापन पत्र बुझाए । ‘माओवादी र सरकारको वार्ता भंग भएपछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले समाते एक महिनासम्म बेपत्ता जस्तै बनाएर राख्यो ।’ उनी भन्छन्- ९ दिन त पूरै बेहोस भएको थिएँ ।
जब मेलमिलापबाट शान्ति भयो तर माओवादीले एकलौटी जितेजस्तो गर्न थाल्यो तब माओवादीको आलोचना गर्न थाले उनको भनाई छ । एकपटक खुलामञ्जमा पैचण्डले भाषण गरिरहँदा उनले रत्नपार्ककको रुखमाथि चढेर माओवादीको बिरोध गर्दै भाषण गरे । त्यसबेला पनि माओवादी कार्यकर्ताले उनलाई मरणाशन्न हुने गरि पिटे ।
‘अब त माओवादी रााष्ट्रिय राजनीतिबाट ओझेल पर्न थाल्यो । कसको आलोचना गरेर आफू हिरो हुन मैले भिलेन पाएको छैन ।’ उनी भन्छन् । सँधैभरी अरुलाई गालीमात्रै गरेर नहुने भएकाले रेडिकल डेमोक्र्याटिक संगठन बनाएर केजरीवाल शैलीको नयाँ शक्ति जन्माउन कोसिस गरिरहेको उनले सुनाए ।
दिनरात सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मुकुन्देको आम्दानीको स्रोत के हो ? ‘सामाजिक सञ्नालमा हारगुहार गरेर मितव्ययी हिसाबले जीउ पालेको छु । नयाँ फेर्न नसकेर थोत्रा लुगा लगाउँदै आएको छु ।’ उनले दुखेसो सुनाए -‘मागे राज्य पाइन्छ, लडे लौरो पाइन्छ भन्छन् मागेर खान के को लाज ?’
आफूलाई वौद्धिक मगन्ते ठान्ने उनी भन्छन् । भोजपुर षडानन्द नगरपालिका ९ खार्तम्छामा उनका नाममा १५ रोपनी जग्गा छ ।
‘एक जनाले पोहोरसाल अमेरिकाबाट १० हजार रुपैयाँ पठाइदिएकी थिइन । केही महिनाअघि साउदीमा रहेको भाइले १२ हजार रुपैयाँ पठाइदिएकेा थियो । दुवईमा रहेका राजनीतिक विश्लेषक दिल निसानी मगरले ४५ सय रुपैयाँ पठाइदिनुभएको थियो ।’ उनले भने ।
सिंहदरबारको नजिकै घट्टेकुलोमा ५ सयको कोठाभाडा लिएर बस्छन् उनी । स्टोभ बाल्न मट्टतिेलमा ५ सय, चामल र तरकारीमा १२/१५ सय र चियापसलमा गरी महिनामा ४ हजार देखि ४५ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनले बताए ।
अब त हप्तादिनलाई पुग्ने मात्रै मट्टितेल छ, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा हारगुहार गर्दा सहयोग पाइयो भने हो नत्र भोकभोकै सडकको बास हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै भने- ‘भारतले हिन्दूराज्य खोजेर नाकाबन्दी लगाएको हो, जनताले पनि त्यही चाहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू तत्काल नाकाबन्दी हटाउ ।’
आफूलाई पनि सुख गर्न मन भएको तर देश र जनताका लागि दुख भोगेको उनले सुनाए । ‘मलाई पनि सुख गर्न । फ्लाटमा बस्न । बिबाह गर्न । छोराछोरी खेलाउन, बुबाआमालाई सन्तोष दिन मन छ ।’ भन्छन्- ‘आफ्नो गाउँमा सुखले बस्दा ७४ जिल्लालाई अन्याय हुने सम्झिएर ७५ जिल्लाका लागि काठमाडौंमा बस्ता दुख पाएको हुँ ।
पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्वमाथि प्रश्न गरी इतिहासको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेपछि केही वर्षअघि मुकुन्देलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पागल हो कि भनेर पाटन अस्पतालसम्म पनि पुर्‍यायो ।
‘तर डाक्टरलाई चै बुद्धिचाल अर्थात चेस खेलेर जित्न चुनौति दिएँ । त्यसपछि त डाक्टरले परिवारसँग नबुझि केही भन्न नसकिने रिपोर्ट दिए । प्रहरीले पनि छाड्यो ।’ मुकुन्दे भन्छन् ।
मुकुदेले संविधान बन्यो भने कानकाट्छु भनेर धेरैपटक सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । संविधान बनेको एक महिना पितिसक्यो तर उनले कान का टेका छैनन ।
‘यो संविधान देखाउनलाई बनाइएको हो । यो नटिकेर फेरि प्रतिगमन फर्किएपछि मुकुन्देले सही भविष्यणली गर्‍यो भनेर कानमा सुनको कुण्डल लगाइदिनेछन् भन्ने विश्वास भएकाले अहिले नै कान नकाटेको हो ।’ उनले भने- फेरि यी कानले धेरै कुरा सुन्न पनि त बाँकी छ नि !
प्लिज सेयर ! शृङ्खलालाई मिस वर्ड बनाउन भाेट गर्ने ४ सजिला माध्यम
तीजको दर खादा साढे ३ सय जना बिरामी
ranjan September 8, 2018
दुर्गेश थापाले अशोक दर्जिको घर बनाउलाई ५० हजार सहयोग गरे
ranjan May 14, 2018
जुम्लामा जाडोले काप्दै अध्यारोमै वित्यो डा. केसीकाे पहिलो रात
आफै रातो पासपोर्ट राखेर रवि लामिछाने माथी दादागिरी ? खोसियो किशोरको रातो पासपोर्ट